८० वर्षदेखि कपाल नकाटेको ९२ वर्षे वृद्ध, कपाल कति लामो ?
नेपाली पब्लिक शनिबार, भदौ २०, २०७७
के तपाई पत्याउनु हुन्छ, एक वृद्ध जसले ८० वर्षदेखि आफ्नो कपाल काटेका छैनन् भन्दा ? तर यो कुरा सत्य हो ।
नगुएन वेन चेन भियतनामको हो चि मिन्ह शहरबाट ८० किलोमिटर टाढा रहेको गाउँमा बस्छन् । भियतनामको टिएन गियांग प्रान्तमा बस्दै आएका ९२ वर्षका नगुएनले ८० वर्षदेखि कपाल काटेको छैनन् । ८० वर्षमा उनको कपाल ५ मिटर लामो भएको छ ।
उनले कपाल कोर्ने र नुहाउने पनि गरेका छैनन् । उनी अझैपनि आफै खाना बनाउँछन्, अन्य नीजि कामहरु पनि आफै गर्छन् । जीवनको उत्तरार्धमा पनि उनी आफै खाना बनाउँछन् । वुद्धको कपालप्रतिको यस्तो शोख, सोच तथा जोश देखेर टिएन गियांग प्रान्तका मानिस दंग पर्छन् ।
कपाल मोह र ईश्वरको वरदान
नगुएनले यतिका वर्षसम्म कपाल नकाट्नुमा उनको एक विश्वास छ । उनी मानिस जस्तो जन्मिन्छ, त्यसलाई त्यही अवस्थामा छोडिदिनुपर्छ भन्नेमा विश्वास गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘यदी मैले यो कपाल काटें भने म मर्छु । त्यसैले म यसलाई प्राकृतिक स्वरुपमा नै राख्न चाहन्छु । यसलाई काटँछाट गर्न हिम्मत आउँदैन । कपालसँगको कुनै परिवर्तन स्वीकार्य छैन ।’
उनले यो बीचको समयमा कपाललाई नकाटे पनि राम्रोसँग स्याहार सुसार गर्ने र सफा गर्ने काम भने गरेका छन् । टाउकोलाई कपडाले कपाललाई ढाक्ने गर्छन् ।
कपाल बचाउन स्कुलबाट भागे
डेली मेल युकेमा प्रकाशित सामाग्रीमा कपालप्रतिको आफ्नो सानैदेखिको मोह सम्झिदैं नगुएन भन्छन्, ‘सानैदेखि कपालको माया गर्थे । तीन कक्षामा पढ्दै थिएँ मलाई स्कूलमा कपाल काट्न भनेर भनियो, म स्कुलबाट नै भागें । त्यसपछि स्कुल नै गइन । त्यही बेलादेखि हो मैले कपाल नकाट्ने र नधुने निर्णय गरेको ।’
उनी सुनाउछन्, ‘एक समय मेरो कपाल कालो र बलियो थियो । त्यो बेला मैले बेलाबेला कपाल पनि कोर्ने गर्थे तर पछि ईश्वरले दिएको वरदानलाई आफूले केही गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्यो । त्यसपछि कही गरिन ।’
५ मिटर लामो र फुलेको कपाललाई स्याहार गर्न पक्कै पनि उनका लागि सजिलो छैन । ९२ वर्षका उनलाई वयस्क भएको बेला कपालको हेरचाह गर्न सजिलो भए पनि अहिले पहिलेको जस्तो सहज छैन । नगुएनका पाँचौं सन्तान छोरा नगुएन वेन लुओमले उनको लामो कपाललाई मिलाउन र फैलाउनका लागि मदत गर्छन् ।
लुओम पनि बुवाको जस्तै कपाल काट्न नहुने कुरामा विश्वास गर्छन् । उनी पनि मानिसले कपाल काटे नराम्रो हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कपाल पाल्ने काम पवित्र काम हो ।’ उनले पनि बुवाले झै कपाल पालेका छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २०, २०७७ १७:४१
आइतबार, माघ २५, २०७७ १७:३१ किन महिला बने डब्लुडब्लुइका चर्चित रेस्लर टेलर रेक्स?
शनिबार, माघ १७, २०७७ १४:१७ महिलाले ‘कचकच’ गर्ने भन्दै ‘सेक्स डल’सँग जीवन बिताउने पुरूषकाे निर्णय